१० तपाईंको दिन सुरु गर्न धर्मशास्त्र | प्रार्थना अंकहरू
घर बाइबल पदहरू १० तपाईंको दिन सुरु गर्न धर्मशास्त्र
१० तपाईंको दिन सुरु गर्न धर्मशास्त्र
आज हामी तपाइँको दिन सुरु गर्न १० शास्त्रपदहरूको साथ छलफल गर्नेछौं। दिनको सुरुवात गर्नका निम्ति परमेश्वरको वचन बाहेक अरू कुनै राम्रो तरीका छैन। परमेश्वरको वचन बोकेको छ शक्ति हाम्रो दिन सहज बनाउनको लागि यो पर्याप्त छ। याद गर्नुहोस् कि बाइबल रेकर्ड गरिएको छ कि हरेक दिन दुष्टताले भरिएको हुन्छ, त्यसैले हरेक दिनमा आशिष दिईन्छ। परमेश्वरको सही शब्दले हामीलाई हाम्रो दिन ठीक गर्न मद्दत गर्दछ।
चाहे तपाईं कार्यालय कर्मचारी हो वा व्यापार व्यक्ति, तपाईंलाई सही शब्द आवश्यक पर्दछ तपाईंको दिन सहज र कुनै पनि खराब घटनाबाट मुक्त बनाउन। प्रभुको वचन पुष्टि र रिमाइन्डर हो कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ हामीमाथि नजर राख्नुहुन्छ। हामीले १० वटा शास्त्रपदहरू अनुपालन गरेका छौ जुन तपाईं सधैं आफ्नो दिन सुरु गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
१० धर्मशास्त्र तपाईंको दिन सुरु गर्न
भजन ११118: २ “" आज त्यो दिन हो जुन प्रभुले बनाउनुभएको छ; हामी यसमा रमाउनेछौं र रमाउनेछौं। ”
तपाईं दिनको भविष्यवाणी गर्न यो शास्त्रपद प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धर्मशास्त्रले भन्छ कि एउटा कुरा घोषणा गर अनि त्यो स्थापित हुनेछ। घोषणा गर्नुहोस् कि त्यो दिन प्रभुले बनाउनु भएको दिन हो र तपाईं रमाउनुहुनेछ र त्यसमा रमाउनुहुनेछ। यसको मतलब यो नयाँ दिनमा कुनै नराम्रो काम आउँदैन, तपाईं कसैको शिकार हुनुहुनेछैन खराब येशूको नाममा परिस्थिति।
भजन :88 13:१ ““ तर हे परमप्रभु, मैले तपाईंलाई पुकारेँ; अनि बिहान मेरो प्रार्थनाले तपाईंलाई रोक्नेछ। ”
बिहान भगवान् बोलाउने बारेमा केहि छ। भजनको पुस्तकले कसरी भन्छ कि म तपाईंलाई बिहान सबेरै बोलाउनेछु। याद गर्नुहोस् कि धर्मशास्त्रले हामीलाई यो सल्लाह दिन्छ कि जब हामी उहाँलाई भेट्न सक्दछौं तब हामी उहाँलाई खोज्छौं, जब उहाँ नजिक हुनुहुन्छ तब हामीले उहाँलाई पुकार्नुपर्दछ। यस प्रार्थनाको अर्थ हुन्छ परमेश्वरको उपस्थिति सधैं नजिकै र बिहान सबेरै चाँडो हुन्छ। यो पद पढ्नुहोस्, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस् र विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईंको प्रार्थनाको उत्तर आयो।
भजन :90 ०: १ “चाँडै नै तपाईंको कृपाद्वारा हामीलाई सन्तुष्टि दिनुहोस्; हाम्रो जीवनभर हामी रमाउन र आनन्दित हुन सकौं। ”
यो दयालु प्रार्थनाको लागि हामीलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि धर्मशास्त्रले भन्छ कि म जसलाई करुणा दर्शाउनेछु र जसमाथि म सहानुभूति दर्शाउनेछु। यो एउटा सल्लाहको पद हो जुन परमेश्वरले हामीलाई कृपाद्वारा आशिष् दिनु पर्छ जुन हामी दिनभर आनन्दित हुन सक्छौं। जब भगवानको कृपा हामीसँग हुन्छ, प्रोटोकोलहरू भाँच्नेछ र कुनै चीज तनाव बिना ठाउँमा खडा हुनेछ।
भजन:: ““ हे प्रभु, तपाईंले बिहान मेरो बिन्ती सुन्नुहुनेछ; अनि बिहानै म तिमीलाई मेरो प्रार्थना गर्ने छु।
यस शास्त्रपदले अझ प्रस्ट पार्दछ कि परमेश्वरले बिहान प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्छ र जवाफ दिनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि दिनको अन्य समयमा पनि परमेश्वरले प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्न। भगवानले प्रार्थनाको जवाफ हरेक पटक दिनुहुन्छ। यद्यपि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले घरबाट बाहिर निस्कनु अघि बिहान सबेरै हाम्रा प्रार्थनाहरू परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ।
भजन १ 143: ““ बिहान मलाई तपाईंको करुणा सुन्नुहोस्; म तपाईंमा भरोसा राख्छु, मलाई हिंड्ने बाटोमा जान दिनुहोस्। म मेरो प्राण तपाईं माथि उठाउँछु। ”
हाम्रो दिन राम्रो र सजिलो होस् भनेर यो प्रार्थनाको भजन हो। यो बिहान सबेरै हामीमाथि आउने भगवानको करुणाको लागि प्रार्थना हो। साथै, हामीलाई प्रत्येक दिनको लागि दिशा चाहिन्छ। जब हाम्रो जीवन दिशाको अमान्य छ गल्ती अपरिहार्य छ। यो प्रार्थनाको भजन हो जुन परमेश्वरले हाम्रो खुट्टालाई कुन बाटोमा जान निर्देशन दिनुहुन्छ।
१ पत्रुस:: ““ उहाँमाथि तपाईंको सबै ख्याल राख्दै; उहाँ तिम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ। ”
यदि तपाईं धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईंको हृदय यति चिन्ताले भरिएको छ कि तपाईंलाई के गर्ने थाहा छैन। यो तपाईको दिनको साथ शुरू गर्नको लागि उत्तम शास्त्र हो। के तपाईं आज दुष्ट मालिक सामना गर्नुपर्दा डराउनुहुन्छ? वा तपाईं साशंक हुनुहुन्छ कि तपाईंको दिन योजनाको रूपमा, चिन्तित नहुनु। हाम्रा सबै चिन्ता र फिक्रीहरू हटाएर परमेश्वरले हाम्रो हेरचाह गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
यशैया: 45: २ म तिम्रो अघि जानेछु र टेक्ने ठाउँहरू बनाउँनेछु; म काँसाका मूल ढोकाहरू टुक्रा-टुक्रा पार्नेछु र फलामका बारहरू टुक्रा-टुक्रा पार्नेछु।
तपाईं चिन्ता गर्न आवश्यक छैन। यो परमेश्वरबाटको एउटा प्रतिज्ञा हो। उसले तपाईंलाई प्रत्येक दिन अघि जान र उच्च स्थानहरू माथि ठाउँ दिने प्रतिज्ञा गरेको छ। यसको मतलब भगवान सर्वशक्तिमान तपाईं अघि जानुहुनेछ र सबै समस्या वा चुनौतीहरू बाहिर निकाल्नुहुनेछ जुन तपाईंको विरुद्धमा उठ्न सक्छ। तपाईंले भर्खरै यो धर्मशास्त्र आफ्नो हृदयमा विश्वासका साथ अध्ययन गर्नु पर्छ कि जस्तो लेखिएको छ, त्यस्तै हुनेछ।
फलामको हरेक ढोका जो तपाईंको विरुद्धमा बन्द गरिएको छ तपाईंको आशिषलाई ढिलो गर्नका लागि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको शक्तिले विच्छेद हुनेछ।
फिलिप्पी :4: १ And र मेरो ईश्वरले तिम्रो सबै खाँचो ख्रीष्ट येशूद्वारा महिमामय सम्पत्ती अनुसार सम्पन्न गर्नुहुनेछ।
यो आश्वासनको शास्त्रपद हो कि हामीलाई चाहिने सबै कुरा परमेश्वरले प्रदान गर्नुहुन्छ। भगवान पिताको धनीलाई बढ्तै बुझ्न सकिदैन। धर्मशास्त्रले भन्दछ कि येशू ख्रीष्टमार्फत महिमामा उहाँको सम्पत्तीहरू छन्। यसको मतलब हाम्रो जीवनको दैनिक हिस्साको लागि अभाव र चाहना हाम्रो अंश हुँदैन।
याकूब १: ““ यदि तिमीहरू मध्ये कसैमा बुद्धिको अभाव छ भने, उसले परमेश्वरसँग मागोस्, जसले सबैलाई उदारतापूर्वक दिनुहुन्छ, र निन्दा गर्नुहुन्न; अनि उसलाई दिइनेछ। ”
दैनिक जीवनको लागि हामीलाई दैनिक ज्ञानको एक निश्चित स्तर चाहिन्छ। त्यसकारण धर्मशास्त्रले हामीलाई यस्तो सल्लाह दिन्छ कि यदि हामीमा बुद्धि छैन भने हामीले परमेश्वरबाट बिन्ती गर्नुपर्छ जसले कुनै निष्कल .्क बिना दिनुहुन्छ। यो भगवानको बुद्धिले तपाईलाई दिनको हरेक दिन कुराकानी गर्ने जवाफ दिन कसरी सिकाउने भनेर सिकाउछ।
भगवानको बुद्धिले तपाईंलाई जटिल परिस्थिति समाधान गर्न मद्दत गर्दछ जस्तो कि यो केही पनि छैन।
यर्मिया २ :29: ११ “किनकि मलाई थाहा छ कि मँ तपाईंको लागि योजनाहरू बनाउँछु,” प्रभु भन्नुहुन्छ, “तिम्रो उन्नति गर्ने छ, हानि गर्ने होइन, तिमीलाई आशा दिने र भविष्य दिने योजना छ।”
दिनको लागि समृद्धि दावी गर्न शास्त्रको यो अंश प्रयोग गर्नुहोस्। उनले भने कि हाम्रो लागि उहाँको योजना सम्पन्न छ र हामीलाई हानी नपरोस। यसको मतलब हाम्रो खण्डमा हुने हरेक खतरालाई येशूको नाममा शक्तिले हटाउनेछ।
तपाईंको दिन सुरु गर्न शास्त्रपद
अघिल्लो लेखमादुश्मनको पासोबाट उम्कन प्रार्थना पोइन्ट्स
अर्को लेखमाविवाहमा व्यभिचार त्याग्ने To तरिकाहरू
एल्विरा लूर जुलाई,, २०२० बिहान १०::23 बिहान
Gracias Dios लेस बेंडीगा !!
पूर्वज शक्तिहरूबाट २० छुटकारा प्रार्थनाहरू